प्लाज्मा थेरापिका लागि रगत संकलन सुरु : RajdhaniDaily.com
HomeBreaking Newsप्लाज्मा थेरापिका लागि रगत संकलन सुरु
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कोभिड संक्रमितको उपचारार्थ प्लाज्मा थेरापिका लागि रगत संकलन थालेको छ ।
३९ वर्षका खिमबहादुर रानाभाटले प्लाज्मा थेरापिका लागि पहिलो रक्तदानसमेत गरेका छन् । कोरोना निको भएका तनहुँका रानाभाटले अरुलाई पनि रक्तदानका लागि आग्रह गरे । ‘मैले कहिल्यै पनि रक्तदान गरेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘कोरोना निको भएपछि मेरो रगतले अरुलाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने थाहा पाएर आएको हुँ ।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को आग्रहबमोजिम विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा सेवा सुरु गरेको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारले जानकारी दिइन् ।
रेडक्रस र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच रगत संकलनमा सहकार्य गर्नेगरी सात बुँदे सम्झौता भएको हो । सोसाइटी अध्यक्ष डा. नेत्र तिमिल्सिना र एसोसिएसन अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले दाताको नाम संकलन गरी प्लाज्मा बैंक स्थापनामा सहकार्यसहित अघि बढ्नेगरी सम्झौता भएको रेडक्रस सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले बताए ।
सम्झौताबमोजिम रेडक्रसले प्लाज्मा दानका लागि प्रविधिक जनशक्ति, ब्यागलगायत आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन तथा प्लाज्मा बैंक स्थापना गर्नेछ । यसमा चिकित्सक संघले प्लाज्मा संकलनका लागि कोभिड–१९ संक्रमिण भई निको भएका, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरी दातासँग समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।
स्थानीय अस्पतालसँगको सहकार्यमा रेडक्रस सुनसरी, चितवन, भक्तपुर, बुटवल, नेपालगन्ज र कैलालीमा रहेका रक्तसञ्चार सेवाले प्लाज्मा थेरापिका लागि रगत संकलन सुरु गरिसकेका छन् । धनुषा र पोखरामा पनि छिट्टै सेवा सुरु गरिँदै छ ।
प्लाज्मा थेरापि उपचारको प्रभावकारिता अनुसन्धानकै क्रममा रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । दातालाई कुनै पनि शारीरिक तथा मानसिक असर नपर्ने चिकित्सक संघले जनाएको छ ।
आज शिवरात्रिः पशुपति क्षेत्रमा मालवाहक सवारी निषेध
काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महाशिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गर्दै पाशुपत क्षेत्र आसपासका मूल सडकको ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाएको छ । महाशाखाले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पूजाआजामा आउने...
काजलले गरिन् नयाँ फिल्म साइन, सेटमा जान आतुर